Taariikhda Andre Ayew - BBC Somali
Ciyaaryahanka caalamiga ah ee u dhashey Ghana, ayaa soo bandhigay inaanu aheyn nin ay quus ku ridi karto xaaladaha adag.
Bishii January, 26 sano jirkan ayaa lagu khasbay inuu galo keydka kooxda Swansea, markii Francisco Guidolin uu noqday tababare, ka gadaal markii la eryey Garry Monk, ha yeeshee si wanaagsan ayuu arrintani uga fal celiyey.
Dabeecaddiisa wanaagsan, ciyaartiisa joogtada ah ee wanaagsan iyo goolashiisa kaliya uma aheyn marqaati shaqsiyaddiisa uu wax ku xalin karo, laakiin sidoo kale waxey ka caawisay kooxda inuu ka hor joogsado iney gasho heerka labaad ee horyaalka.
Ayew ayaa dhaliyey laba gool oo khatar ah, taasoo ay kaga badiyeen 3 - 1 Liverpool, si uu uga kaalmeeyo kooxdiisa iney hesho natiijo wanaagsan, taasoo kama danbeyntii xaqiijineysa iney Swansea badbaaday, kagadaal olole addag oo madax xanuun badnaa.
Sidaa darteed, ma aheyn wax lala yaabo inuu ku guuleysto abaal marinta xagaaga ee kooxda.
Foomkiisa wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh bishii August ee aynu soo dhaafnay. Kooxda West Ham United ayaa ku wareejisay Ayew bariga London record qiimihiisu ku kacayo £20.5m.
Ayew ma nasiib badnayn markii uu si xun ugu dhaawacmay horyaalka.
Labo bilood oo uu maqnaa kadib, wuxuu dib ugu noqday ciyaarihiisa dhamaadkii bisha October.
Waxey aheyd "hamuunta ka muuqata indhaha Ayew" markii ugu horeysay ee ay si wadajir ah u wada dhaleen, taasoo ku riixeysay in Ayew uu tuso qiimaha uu ugu fadhiyo kooxdiisa cusub xili ciyaaredka soo socda.
Dhabtii, wuxuu sii wadey illaa iyo 2016-ka Ayew inuu ahaado Ciyaarhanka Kubadda Cagta Caalamiga ee ugu weyn Ghana.
Xagga sare ayuu kaga qornaa waraaqaha lagu muujiyo natiijooyinka, iyadoo dalkiisa uu kaga adkaaday 2-0 kooxda Mauritius, taasoo kooxda Xidigaha Madow u suuragelisay inay u gudubto heerka is reeb reebka kama danbeynta ee ciyaaraha koobka Qaramada Africa ee ka dhici doona sanadka danbe dalka Gabon.
Markii ay jirtey jah wareerka 2016-da - taasoo ah dhaawac iyo ka ciyaarista dhinac addag, Ayew ayaa mar waliba soo gudbinayey ciyaarta la doonayo teeda ugu wanaagsan.
Xiligaa kadib, wuxuu wajahayey inta badan cadaadis iyo quud dareyn noloshiisa, isagoo ah wiilka rug cadaagii reer Ghana Abedi Pele Ayew, kaasoo si guud ahaaneed looggu qiimeeyo inuu kamid yahay ciyaar yahanada Afrika ugu wanaagsan mid ka mid ah inta badan.
Abadi Pele Ayew ayaa ciyaarey 73 kulan, wuxuu u dhaliyey 33 gool kooxda qaranka ee Xiddiga Madow, isagoo ka caawiyey in 1982-dii ay qaadeen koobka Qaramada Afrika, wuxuuna ciyaarayey illaa iyo sanadkii 1992-dii. Sidoo kale, wuxuu 1993-dii la qaadey kooxda Marseille koobka Horyaalka Yurub, isagoo kooxdiisa iyo markaa ay guul daro la kulmeen gaba gabadii laba sano kahor.
Laakiin Axmed Brynes, oo ah tababaraha kooxda Nania FC - dhanka Ghana oo ah halkii uu markii ugu horreysay uu kasoo billaabay Ayew, si uu u raaco saan qaadka aabihii - ayaa sameeyey odoros cajiib ah.
"Markii Ayew uu ahaa oo kaliya 14 sano jir, wuxuuba markaaba soo bandhigay ciyaar cajiib aa, isagoo markaa oranayey 'waxaan doonayaa inaan noqdo qof ka wanaagsan aabahay", Byrnes wuxuu sidaas u sheegay BBC-da qeybteeda Sports-ka.
Abedi Pele Ayew ayey BBC-da u dooratey inuu noqdo ciyaar yahanka Kubadda Cagta ee sanadka 1992-dii. Ayew-ga yar ayaa isna qaaaday abaalmarintaasi 2011-kii, balse sanadkanna ma heli doonaa?